Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A October 2011 (1)
Q and A October 2011 (1)
8 Oct 11, 19:14
TB ရောဂါကာကွယ်တဲ့ဆေး ထိုးလို့ရပါသလားဆရာ။
တီဘီ ကာကွယ်ဆေး BCG ကို မွေးကာစမှာ တခါသာ ထိုးဘို့လိုပါတယ်။
8 Oct 11, 15:55
HI ! Saya...e-mail.....လိပ်စာလေး ပေးလို့ ရမလားခင်ဗျာ.......
drswe01@gmail.com ကျွန်တော့် (ဂျီမေးလ်) နဲ့ (အီးမေးလ်) အတူတူဘဲနော်။
8 Oct 11, 15:34
condom နဲ့ လိင် 2-3 ခါ ဆက်ဆံ မိရုံနဲ့ HIV/AIDS မကူးနိုင်ပါဘူးနော် ဆရာ။
(၁) http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=464:condoms-safety-and-effectiveness-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 Condoms Safety and Effectiveness (ကွန်ဒွမ်) ရဲ့ ထိရောက်မှု နဲ့ စိတ်ချရမှု
(၂) http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=449:stds-and-condom-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 STDs and Condom (ကွန်ဒွမ်) သုံးပေမဲ့ ကူးနိုင်တဲ့ရောဂါတွေ
(၃) http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=442:condom-standards-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 Condom Standards စိတ်ချရတဲ့ (ကွန်ဒွမ်) ဆိုတာ တွေကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
7 Oct 11, 06:04
ပေါင်ရင်းမှာ ဂျွတ် လိုလို ပွေးလိုလိုနဲ့ပါ ယားနာမျိုးတွက် ဘယ်လိုဆေးကို သုံးရမလဲဆိုတာ မေးချင်တာပါ။
http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2965:ringworm-&catid=30:medical-writings-&Itemid=46 Ringworm ပွေး ကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်။
2 Oct 11, 22:07
My right neck was inflamed2years and it appears mucus and joints are sometime inflamed. Please advise me what sign of disease?
ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာ ရှိပါက အတိုင်းမေးစေလိုပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 3:54 PM